Building Construction and Infrastructure: Introduction to Fire Protection Systems
အချို့အပိုင်း တွေ ကို ပြန်ပြီးတည်း ဖြတ် ရေးသားနေပါတယ်။ Some sections may be updated Please check new revision & posts in
အဆောက်အအုံ တစ်ခု အတွက် အရေးကြီး တဲ့ အချက် ကတော့ မီးကြောင့် လူတွေ အနာတရ ဖြစ်ရတာ၊ အသက်ဆုံးရှုံးရတာ၊ ပစ္စည်းဥစ္စာ ဆုံးရှုံးရတာ တွေကို တတ်နိုင်သမျှ ကာကွယ်နိုင်ဘို့ လိုအပ်ပါတယ်။
တိုးတက်နေတဲ့ နိုင်ငံတွေ မှာ အဆောက်အအုံ တွေ အတွက် Fire Protection Systems တွေ ကလည်း မပါမဖြစ် အဓိက လိုအပ်ချက် အနေ နဲ့ ပါဝင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ Fire Protection Systems တွေ ကို အကြောင်းအရာ ၄ - ပိုင်း ခွဲ ပြီး တင်ပြ ထားပါတယ်။ မှီငြမ်းစရာ Reference တွေ ကို လည်း ထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်။
Fire Protection System ဆိုတာဘာလဲ။
A system that includes devices, wiring, piping, equipment and controls to detectafire or smoke, to actuate signal, and to suppress the fire or smoke.
Fire/Smoke Detection (မီး နှင့် မီးခိုး ကို အာရုံခံ သိရှိနိုင်ဘို့)၊ Fire Suppression (မီးငြိမ်းသတ် နိုင်ဘို့) နဲ့ Smoke Extraction (မီးခိုးတွေ ကို ပြယ်သွားအောင် စုတ်ထုတ်ပစ်နိုင်ဘို့) တွေ အတွက် လိုအပ်တဲ့ စက် ပစ္စည်းကိရိယာတွေ၊ ဝါယာကြိုးတွေ၊ ပိုက်တွေ၊ စက်ပစ္စည်း တွေ နဲ့ ထိန်းချုပ်တဲ့ စနစ်တွေ ပါတဲ့ စနစ် ကို Fire Protection Systems ( မီးအန္တရာယ် ကာကွယ်ရေး စနစ် တွေ ) လို့ ခေါ်ပါတယ်။
ဘာအတွက် လိုအပ် ရတာလဲ။
Primary Objectives (မူလ ရည်ရွယ်ချက်)
မီးကြောင့် အသက် တွေ ကို မဆုံးရှုံးစေဘို့
အိုးအိမ်၊ အဆောက်အအုံ စည်းစိမ် ဥစ္စာ တွေကို မီးဘေး ကနေ ကာကွယ်ဘို့
Secondary Objectives (ဒုတိယ ရည်ရွယ်ချက်)
မီးလောင်မှု ကြောင့် အလုပ်ပျက်ရတာ ကို လျှော့ချနိုင်ဘို့။
Thermal Element: Flame and Heat (မီးတောက် နဲ့ အပူ)
Non-Thermal Element: Smoke and Toxics(မီးခိုး နဲ့ အဆိပ်ငွေ့)
Smoke is primary cause of fire related death. (မီးလောင်မှု နဲ့ ဆက်နွယ်တဲ့ အသက် ဆုံးရှုံး မှုတွေ ရဲ့ အဓိက အကြောင်းရင်း က မီးခိုးကြောင့် ပါ။)
Life Safety is Ultimate Building Design
အဆောက်အအုံ တစ်ခု မီးဘေးက နေ ကာကွယ်ဘို့ အတွက် အနိမ့်ဆုံး လိုအပ်ချက်တွေ ကတော့။
Mean of Escape for the Occupants (နေထိုင်သူ တွေ အန္တရာယ် ကင်းကင်း ထွက်ခွာ စေနိုင်ဘို့)
To prevent spread of fire within the building and from one building to another (အဆောက်အအုံ အတွင်း မှာ ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အခြားအဆောက်အအုံ ကိုဖြစ်ဖြစ် မီးကူးစက် ခြင်းကို ကာကွယ် ဘို့)
Means of detection and extinguishment of fire (မီးလောင်တာ ကို အာရုံခံ သိရှိ နိုင်ဘို့ နဲ့ ငြိမ်းသတ် နိုင်ဘို့)
လူတွေရဲ့ အသက် အန္တရာယ် မဖြစ်စေဘို့ က အဆောက်အအုံ တစ်ခုအတွက် အရေးအကြီး ဆုံး လိုအပ်ချက် ပါ။ မီးလောင်မှု တစ်ခု ဖြစ်ပြီ ဆိုရင် ပထမဆုံး အန္တရာယ် ပေးမှာ က အထဲမှာ ရှိနေသူ တွေ ကို ပါ။ နေထိုင်၊ သုံးစွဲ တဲ့သူတွေ၊ အဆောက်အအုံ ကို အသုံးပြုမှု ပုံစံ၊ လုပ်ငန်း တွေ အပြင် အဆောက်အအုံ ရဲ့ အမျိုးအစား နဲ့ အမြင့်တွေ ပေါ် မူတည်ပြီး Structural Fire Precaution လိုအပ်ချက် ကွဲပြားနိုင်ပါတယ်။
High-rise Building တွေမှာ ရှိနေတဲ့ လူတွေ ကို ကာကွယ် ဘို့ လိုအပ် တဲ့ Means of Escape က စိန်ခေါ်မှု တစ်ခုပါ။ အတွင်းထဲ မှာ ရှိနေတဲ့ လူတွေ ကို ကာကွယ် ပေးနိုင်ဘို့ အတွက် မီးအားကို မပြင်းအောင် ထိန်းနိုင်ဘို့ လိုအပ်သလို လူတွေ ကို လည်း အဲဒီ High-rise Building ထဲ မှာ ပဲ ဘေးကင်းရာ ကို ရွှေ့ပြောင်းပေး နိုင်ဘို့ လိုအပ်နိုင်ပါတယ်။
ဘယ်အခြေအနေ မှာ မှ လူတွေ မီးထဲ မှာ ပိတ်မိ မနေအောင် ဒီဇိုင်း လုပ်ဘို့ ဆိုတာ တော့ မဖြစ်နိုင် ပါဘူး။ မီးသတ်စနစ် တွေ ကို သေသေချာချာ ထိန်းသိမ်း မထားတာ၊ အရေးပေါ် အခြေအနေ မှာ လုပ်သင့်တာ ကို မလုပ် နိုင်တာ တွေ စတဲ့ လူတွေ ရဲ့ ပေါ့လျော့မှု တွေကြောင့် လည်း အဆောက်အအုံ ထဲမှာ လုံးဝ အန္တရာယ် ကင်းရှင်းဘို့ က မဖြစ်နိုင်ပြန် ပါဘူး။
ဒါကြောင့် မို့ Architects တွေ Engineers တွေ နဲ့ Building designers တွေ Life Safety၊ မီးဒါဏ် ခံနိုင်ရေး က တစ်ဖက်၊ လက်တွေ့လိုအပ်ချက်၊ အလှအပ၊ ဒီဇိုင်း နဲ့ Fire Regulations ကို မျှမျှတတ စဉ်းစားချင့်ချိန် တဲ့ အခါ အခက်အခဲ တွေ၊ ကန့်သတ်ချက် တွေ ကို ကြုံတွေ့ ရ လေ့ရှိပါတယ်။
Building Considered asaWhole
အဆောက်အအုံ တစ်ခု လုံး အနေနဲ့ ခြုံငုံ ပြီး စဉ်းစားရင်
Passive Fire Protection (မီး ဒါဏ်ခံ နိုင်ဘို့)
Active Fire Protection (မီးငြိမ်းသတ် နိုင်ဘို့)
ရယ် လို့ နှစ်ခု တွေ့နိုင် ပါတယ်။
ကြိုတင် ကာကွယ် တဲ့ Passive Fire Protection ဆိုတာ ကတော့ Planning ကိစ္စ မို့ Building Design Planning Stage မှာ ကတည်းက Fire Hazard, Fire Risk စတဲ့ မီး အန္တရာယ် တွေ ကို လျော့ကျ စေနိုင်ဘို့ ကြိုတင် စဉ်းစား ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ မီးဒါဏ်ခံ နိုင်တဲ့၊ မီးမလောင် နိုင်တဲ့ ပစ္စည်းတွေ ရွေးချယ်ဘို့၊ မီးလောင်မှု ဖြစ်တဲ့ အခါ မီး၊ မီးခိုး နဲ့ Toxic Fumes (အဆိပ်ငွေ့) တွေ အခြားနေရာ တွေ ကို မပြန့်ရ အောင် ထိန်းချုပ် နိုင်ဘို့ အတွက် အဆောက်အအုံ ကို Fire-tight cells or compartments (မီးဒါဏ်ခံ နိုင်တဲ့ အခန်း တွေ) အဖြစ် Vertically ရော Horizontally ပါ ဖွဲ့ ထားပေးဘို့၊ စ တာတွေ ကို အခြေခံ အနေနဲ့ ထည့်သွင်း ပေးရပါတယ်။
ထိရောက်တဲ့ Passive Fire Protection ဆိုတာက Good Planning, Good Design and Sound Construction ကို ပြသပါတယ်။ ဒါက အဆောက်အအုံ ရဲ့ အခြားအခြေခံ လိုအပ်ချက်တွေ ကို အားဖြည့်ပေး ပါတယ်။
Active Fire Protection ဆိုတာကတော့ လူတွေ ကိုယ်တိုင် ပါဝင် ငြိမ်းသတ်ရတဲ့ Manual Fire Protection Systems တွေ နဲ့ အလိုအလျှောက် ငြိမ်းသတ်ပေး နိုင်တဲ့ Automatic Fire Protection Systems တွေ ပါဝင် ပါတယ်။ မီးလောင်မှု ဖြစ်တာ ကို သတိပေးနိုင်ဘို့၊ မီးကို ထိန်းချုပ်နိုင်ဘို့ နဲ့ ငြိမ်းသတ် နိုင်မဲ့ စနစ်တွေ ဖြစ်တဲ့
Portable Fire Extinguishers (အသင့်သုံး မီးသတ်ဘူးများ၊)
Smoke Spill / Smoke Control Systems (မီးခိုး ကိုပြယ်အောင် စုတ်ထုတ်တဲ့ စနစ် ၊ မီးခိုး ကိုထိန်းချုပ်တဲ့ စနစ်)၊
ဒါတွေ အပြင် Fire Alarm (မီးလှန့် အချက်ပေး စနစ်) တွေ နဲ့ Communication Systems ဆက်သွယ်ရေး စနစ်တွေ ကတော့
တွေ ပါဝင်ရ ပါလိမ့်မယ်။
Fire Triangle (မီး တြိဂံ)
မီးကို ဖြစ်စေတဲ့ အခြေခံ သုံးခု ကတော့
Fuel (လောင်စာ), i.e. Something to Burn
(လေ၊ အောက်ဆီဂျင်), i.e. Oxygen to Sustain the Combustion
ဒီသုံးခု ပြည့်စုံ မှ မီး ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီအထဲမှာ Chemical Reaction ဆိုတာ ကိုပေါင်းထည့်ပြီး fire tetrahedron (မီး ပိရမစ်) လို့လည်းသတ်မှတ် ကြပါတယ်။ ဒီအထဲ ကတစ်ခု ကို ဖယ်နိုင်ရင် မီးငြိမ်းပါမယ်။ ဒီ principle (နိယာမ) က မီးသတ်စနစ် တွေ အားလုံး အတွက် အခြေခံ ပါပဲ။
အကြီးအကျယ် ဆုံးရှုံးမှု ကိုဖြစ်စေတဲ့ မီးလောင်မှု ကြီး တွေ ကို ဖြစ်စေတဲ့ မီးတွေ ကို၊ အချိန်မီ၊ အချိန်ကိုက် မှာ ဆိုရင် ရေ တစ်ခွက် တစ်ဖလား လောက် နဲ့တင် ငြိမ်းသတ်နိုင်ပါတယ်။
Ignition, Growth and Development of Fire
Ignition : Fuel နဲ့ Oxygen ဓာတ်ပြု မီးပွင့်ပြီး အပူ နဲ့ အလင်း ထုတ်ပေးတဲ့ Process ပါ။
Growth : မီးပွင့်ပြီးတာ နဲ့ မီးက အရှိန်အဟုန် နဲ့ သူ့ဟာသူ ကြီးလာနိုင် ပါတယ်၊ ပိတ်လှောင်ထားတဲ့ အခန်း ထဲမှာ မီးလောင်နိုင်တဲ့ Combustible Material တွေကို မီးလောင်နိုင်တဲ့ Gas Constriction ရောက်အောင် အပူပေးခံ ရမယ်ဆိုရင် Critical Stage ကိုရောက်လာပြီး ရုတ်တရက် တစ်ခန်းလုံးက ပစ္စည်းတွေ မီးပွင့် တောက်လောင် လာပါ လိမ့်မယ်။ ဒီလိုဖြစ်တာကိုတော့ Flashover လို့ခေါ်ပါတယ်။
Flashover: Enclosed Area တစ်ခုမှာ Combustible Material တွေ အားလုံး တစ်ပြိုင်တည်း မီးထ တောက်တာ ကို ခေါ်ပါတယ်။
Development : ဒီအချိန် မှာ မီးအရှိန် ရနေပါပြီ။ အပူချိန် မြင့်လာတာ နဲ့ အတူ အခြားနေရာ တွေ ကိုပါ ပြန့်ပြီး အရှိန် နဲ့ ကူးစက်လောင်ကျွမ်းတာ ကို ဖြစ်စေ နိုင်ပါတယ်။
Decay : မီးလောင်စရာ လောင်စာ (သို့) အောက်ဆီဂျင် တစ်ခုခု ကုန်သွားတဲ့ အခါ၊ မီးအားလျော့ ကျပြီး မီးငြိမ်းတဲ့ (မီးညွန့်ကျိုး တဲ့ အဆင့်) ကိုရောက်ပါတယ်။
o မီးလောင်နိုင်တဲ့ Combustible Material အတိုင်းအဆ (အရည်အတွက်) ကိုတော့ Fuel Load လို့ ခေါ်ပါတယ်။
Principle of Smoke Propagation
သဘာဝ နိယာမ တွေ အရ အပူ နဲ့ မီးခိုးတွေ က ပူတဲ့ နေရာ ကနေ အေးတဲ့ နေရာ ကို နည်း သုံးနည်း နဲ့ ကူးစက် ရောက်ရှိ နိုင်ပါတယ်။
CONVECTION : မီးလောင်လို့ ထွက်လာတဲ့ products တွေရဲ့ ၇၅% အထက် ဖြစ်တဲ့ မီးစ၊ မီးခိုး တွေ Toxic Gases တွေ က အရမ်းပူနေ တဲ့ Rising convection currents of hot gases at 800 - 1000ºC (အထက်ထိုးတက်နေတဲ့ ဓာတ်ငွေ့ စီးကြောင်း) ထဲကို အလျင်အမြန် ပျံ့နှံ့သွားပါတယ်။ ဒီ Rising convection currents ကို ပိတ်လှောင်ခံ ရတဲ့ အခါ (ဥပမာ၊ Underside of floor or ceiling) Mushroom Effect ဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အခန်းတွေ escape route တွေကို ပါ မီးခိုးတွေ နဲ့ ပိတ်လှောင်ထားပြီး လူတွေ ထွက်ရခက်အောင်၊ ထွက်လို့ မရအောင် ဖြစ်စေပါတယ်။
RADIATION : RADIATION : Radiant Heat က အနီးအနား မှာ ရှိတဲ့ အဆောက်အအုံ တွေ အားလုံး (သို့) ပစ္စည်းတွေ ဆီ ကို ကူးစက်စေ ပါတယ်။ Heat Energy ကို Electromagnetic Wave အနေ နဲ့ ပို့လွှတ် တာပါ။ Radiant Heat က Glass Windows လို မှန် တွေကို လွယ်လွယ်ကူကူ ဖြတ်ကူး နိုင်တာ မို့ Glass Widows ကြီးကြီးတွေ များများ ရှိတဲ့ အဆောက်အအုံ က အခြားအဆောက်အအုံ တွေ ကို ကူးစက်ဘို့ ပိုမို လွယ်ကူပါတယ်။
CONDUCTION : အပူလျှောက်ကူးတယ် ဆိုတာ excitation of molecules ဖြစ်တာကြောင့် အပူ ကူးတာပါ။ Metal (သတ္တု) တွေ က ကျောက်ခဲ တွေထက် စာရင် Conduction အပူ ပို ကူးနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် Conducted Heat က နံရံတွေ၊ မျက်နှာကြက်တွေ၊ ကြမ်းခင်းတွေ၊ ခန်းစီး တွေ ကနေ အခြားအခန်း ကို ကူးနိုင်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် metal joints တွေ က တစ်ဆင့်ပါ။ Conduction Heat က ကပ်လျက် အခန်းတွေ မှာ ရှိတဲ့ မီးလောင်နိုင်တဲ့ ပစ္စည်းတွေ ကို မီးထ တောက်နိုင်တဲ့ ignition temperature ကို ရောက်အောင် အပူပေး နိုင်ပါတယ်။
မီးဘေးအန္တရာယ် က ကင်းဝေးစေ မဲ့ Total Fire Safety System မှာ Structural Integrity လို့ခေါ်တဲ့ မီးလောင် တဲ့ အချိန် မှာ အဆောက်အအုံ ရဲ့ မပြိုလဲပဲ တောင့်ခံ နိုင်စွမ်းရည် က မပါမဖြစ် ပါရပါတယ်။ အထဲမှာ လူတွေ ရှိနေတုန်း အဆောက်အအုံ ရဲ့ ပြိုလဲ ခဲ့ရင် ကပ်ဆိုက်တာ ပါပဲ။ Workmanship Quality (လက်ရာ အရည်အသွေး) နဲ့ သုံးစွဲ တဲ့ ပစ္စည်းတွေ ရဲ့ Durability (အကြမ်းခံ နိုင်မှု)၊ sustainability (တာရှည် ခံနိုင်မှု) တွေ ကို သေချာ ဂရုစိုက် ဘို့ လည်း လိုအပ်ပါတယ်။ ထိထိရောက်ရောက် မီးကို တားထား နိုင်ဘို့ အတွက် လိုအပ်တဲ့ အတိုင်းအတာ အထိ Fire Resistance (မီးဒါဏ်ခံ နိုင်ရည်အား) ရှိရပါမယ်။ Fire Resistance ရဲ့ Criteria တွေ က တော့
INSULATOIN: အပူဒါဏ် ခံနိုင်ရည် နဲ့ အပူကူးမှု အား ခုခံ နိုင်မှု စွမ်းရည်။
INTEGRITY: မပြိုမလဲ၊ မပျက်စီးပဲ တောင့်ခံ နိုင်ရုံ မက၊ မီးတောက် နှင့် မီးခိုး များကို တားထား နိုင်သော စွမ်းရည်။
STABILITY: Structural Element တစ်ခု ၏ အရေးပေါ် အခြေအနေ တွင် မပြိုမလဲ ပဲ ကြံ့ကြံ့ ခံနိုင်စွမ်းရည်။
Structural Fire Protection ရဲ့ အခန်း ကဏ္ဍ ကတော့ မီးနဲ့ မီးခိုး တွေ တစ်နေရာ ကနေ တစ်နေရာ ကို မကူးစက် စေဘို့ပါ။ မီးမကူးစက် စေဘို့ ကို ထိန်းချုပ်နိုင်ဘို့ အကောင်းဆုံး နည်းလမ်းကတော့ စောစော စီးစီး Detection (အာရုံခံ သိရှိ နိုင်ဘို့) နဲ့ Extinguishment (ငြိမ်းသတ်မှု) ဘို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို အခြေအနေ ကို ရဘို့ အတွက် ယုံကြည် စိတ်ချ နိုင် တဲ့ မီးသတ်စနစ် တွေ နဲ့ Good Housekeeping လိုအပ်ပါတယ်။
မီးလောင် မှု ကို အထောက်အပံ့ ပေးနိုင်တဲ့ အချက်တွေ ကတော့
မီးလောင် နိုင်တဲ့ ပစ္စည်း အတိုင်းအဆ
အဲဒီ့ ပစ္စည်း တွေ ရဲ့ မီးလောင်မှု စွမ်း အား (i.e. their calorific value)
Surface Area : ပစ္စည်း တော်တော် များများ က near surface မှာ မီးလောင်ကျွမ်း လေ့ရှိပါတယ်။
The potential heat source
Airflow condition and unrestricted air supply that sustain combustion.
အဆောက်အအုံ ကို ဒီဇိုင်း လုပ်ခြင်း နဲ့ ဆောက်လုပ်ခြင်း တွေ က အထဲမှာ ရှိတဲ့ ပစ္စည်းတွေ ထက် အကျိုးသက်ရောက်မှု ပိုလို့ ရှိ နိုင်ပါတယ်။
Architects or Engineer တွေ က အဆောက်အအုံ ရဲ့ အသုံး၊ တည်နေရာ၊ အကျယ်အဝန်း၊ အမြင့် နဲ့ အထဲမှာ ရှိနေနိုင်တဲ့ လူဦးရေ နဲ့ mobility (သွားလာ ရွှေ့ပြောင်းနိုင်မှု) တွေ ပေါ် မူတည် ပြီး မီး အန္တရာယ် အတိုင်းအဆ ကို ခန့်မှန်းရ ပြီး Design and Construction လုပ်ရပါတယ်။
Fire Tests တွေ အရ အရာဝတ္ထု တွေ မီးလောင်တဲ့ အခါ အသက်ရှုကြပ် စေတဲ့ ဓာတ်ငွေ့တွေ၊ အဆိပ်ငွေ့ တွေ နဲ့ အတူ မျက်စေ့ ကိုယားယံစေ၊ အမြင်အာရုံကို လည်း ဝေဝါးစေပြီး မြင်ကွင်းကိုလည်း ပိတ်ဆို့စေတဲ့ မီးခိုးတွေ ထုတ်လွှတ် ပါတယ်။ ပလတ်စတစ် ပစ္စည်း တော်တော်များများ မီးလောင်တဲ့ အခါ highly poisonous vapors နဲ့ very dense smoke ကို ထုတ်လွှတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် Building Consultant အဖို့ အဆောက်အအုံ သုံး ပစ္စည်းတွေ ရဲ့ အင်္ဂါရပ် တွေ ထူးခြားချက်တွေ ကို မသုံးခင် စစ်ဆေးဘို့ က အရေးကြီးပါတယ်။ စဉ်းစားရမဲ့ အချက်တွေ ကတော့
မီး၊ မီးခိုး နဲ့ ရေ ကြောင့် ပျက်စီး နိုင်မှု
မီးလောင်နေတဲ့ အစိတ်အပိုင်းတွေ ပြုတ်ကျ နိုင်မှု - skylight etc.
မီးဒါဏ်သင့်ခဲ့ ရင် ပြင်ဆင်ရမဲ့ ကိစ္စ Repair Issue တွေ၊
ထိန်းသိမ်းဘို့ နဲ့ လဲလှယ်ဘို့ စတဲ့ maintenance and replacement issues တွေ၊
Good Building Design with Fire Safety Measures
မီးသတ်ယာဉ် နဲ့ fire appliances access လုံလုံလောက်လောက် ထားရှိပေးရမယ်။ မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ နဲ့ ကယ်ဆယ်ရေး ပုဂ္ဂိုလ် တွေ ကို အထောက်အကူ ပေးမဲ့ fire hydrants နဲ့ အခြား လိုအပ်တဲ့ facilities တွေ ပါ ရှိထားရမယ်။
လျင်လျင်မြန်မြန် ထိထိရောက်ရောက် detection လုပ်နိုင်ဘို့ နဲ့ ငြှိမ်းသတ် နိုင်ဘို့ အတွက် သင့်တော် တဲ့ အခြေအနေ ဆိုရင် လုံလောက် တဲ့ fixed installation ထားပေးရမယ်။
Building services ကို designing and installing လုပ်တဲ့ အခါ၊ ဒီ Services တွေ က မီး၊ မီးခိုး နဲ့ toxic fumes တွေ ကူးစက် ပျံ့နှံ့မှု ကို အကူအညီ မပေးဘို့ ထည့်သွင်း စဉ်းစား ရပါမယ်။ (ဥပမာ၊ ၊ Fire Damper in air ducts, fire seal for pipes when penetrating fire rated walls..)
Construction အတွက် မီးမြန်မြန် မကူးစေနိုင်တဲ့၊ အန္တရာယ် ရှိတဲ့ မီးခိုး နဲ့ အဆိပ်ငွေ့ မထုတ်လွှတ်မဲ့ materials တွေ ကို ရွေးချယ် ရပါမယ်။
အဆောက်အအုံ ကို fire resisting walls and floors, တွေ ကိုသုံး ပြီး မျှတတဲ့ အရွယ်အစား ရှိတဲ့ compartments (အခန်းတွေ) အဖြစ် ကန့်ပေးရပါမယ်။ Floor တစ်ခုနဲ့တစ်ခု (သို့) Fire compartment တစ်ခု နဲ့ တစ်ခု ကြားထဲမှာ ရှိနေတဲ့ openings တွေ မှာ လည်း သင့်တော်တဲ့ fire stops ထည့်ပေးရပါမယ်။
exterior ofabuilding ကိုလည်း အဆောက်အအုံ တစ်ခုကနေ တစ်ခု ကို မီးကူးမလွယ်အောင် စဉ်းစား ဆင်ခြင်ပြီး Designing and constructing လုပ်ရပါမယ်။
Fire Safety Regulations / Acts
နိုင်ငံတိုင်းလိုလို မှာ လူတွေ ရဲ့ အသက်အန္တရာယ် ကို ကာကွယ်ဘို့ အတွက် Fire Safety Regulations တွေ ပြဋ္ဌာန်းထားလေ့ ရှိပါတယ်။ အဓိက ကတော့ အဆောက်အအုံ ကိုရော၊ အထဲမှာ ရှိနေတဲ့ သူတွေ ကိုရော၊ မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ ကိုပါ အကာအကွယ် ပေးဘို့ အတွက် မလိုက်နာ မနေရ ပြဋ္ဌာန်းချက်တွေ ပါဝင်လေ့ ရှိပါတယ်။
အဆောက်အအုံ ဆောက်လုပ်ခွင့် permit ရဘို့ အတွက်လည်း Fire Department ရဲ့ Approval လိုအပ်လေ့ ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် မို့ International Fire legislations and Standards ကို သိရှိလေးစား လိုက်နာတတ် ဘို့ လိုအပ် ပါတယ်။
အဆောက်အအုံ တစ်ခု အတွက် မီး အန္တရာယ် ကာကွယ်ရေး ကို စဉ်းစားတဲ့ အခါ နေထိုင်သူ တွေ အန္တရာယ် ကင်းဝေးစေရေး နဲ့ မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ အန္တရာယ် ကင်းဝေးစေရေး တွေ က ဆက်နွယ်နေတယ် ဆိုတဲ့ အချက်နဲ့ မီး၊ မီးခိုး၊ အဆိပ်ငွေ့ တွေရဲ့ effects (အကျိုးဆက်တွေ) အားလုံးခြုံငုံ သုံးသတ်ပြီး မှ ဒီဇိုင်း အဖြေ ရနိုင်မယ် ဆိုတာ သိရှိ နားလည် နေဘို့ အရေးကြီးပါတယ်။
Fire Protection Systems တွေ ကို ဒီဇိုင်းလုပ်တဲ့ အခါ Classification လို့ခေါ်တဲ့ အုပ်စုခွဲခြားမှု တွေ လုပ်ရပါတယ်။
Classification of Commodity Stored
Classification of Fire (NFPA/B.S)
Class Risk Involved Method of Extinguishment Extinguishing Agent
A A Ordinary Combustible Material
(such as Woods, cloth, paper, plastics, etc.) Cooling Water
B B Inflammable Liquid
(Oils, Greases, Tars, Oil-based paints, Lacquers, flammable gases, etc.) Smothering Dry Powder,
- C Fire Involving Gases, e.g oxygen, LPG, LNG, etc. Smothering Dry Chemical Powder
D D Combustible Materials
(Magnesium, Titanium, zirconium, sodium, lithium and potassium) Special Methods Special Methods
C E Energized Electrical Equipment Smothering with
non-conductive agent Dry Powder,
- F Fire Involving fats and cooking oils Smothering Dry Powder,
ဒီ Classifications တွေ က စနစ်တစ်ခု နဲ့ တစ်ခု မတူတာ သတိထားပြီး နိုင်ငံ အလိုက်သက်ဆိုင် တဲ့ Classifications တွေ ကိုလေ့လာပါ။ ဒီ သတ်မှတ်ချက် တွေ ကို Graphics နဲ့လည်း ပြတတ်ပါတယ်။ Wikipedia မှာ ဆက်လက် လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
Classification of Hazards (NFPA)
Class Locations Combustible Materials Abbr.
Light(Low) Non-Industrial Type Premises
(Offices, Classroom, churches, assembly halls, etc.) Minor Amount of Class A Materials. XLH
(Moderate) Commercial and Industrial Premises
(mercantile shops and allied storage, light manufacturing, research operation, auto showroom, garages, etc.) Handling and Processing of class A & B materials; Unlikely to burn intensely in the early stage of fire. OH1
(high) Commercial and Industrial Premises With abnormal Fire Load High Storage / Production of class A & B materials.
Likely to develop rapid and intensely burning fires Cat I
Classification of Occupancy (BOCA, UBC, SBC)
Group Description Abbr.
A Assembly A-1: Occupied by more than 1000 People
A-2: Less Than 1000 People
A-3,A-4 & A-5 : Others A-1 to A-5
B Business Used for offices, professions, or service-type transitions B
E Educational E-1, E-2: Elementary Schools,
E-3: Daycare E-1 to E-3
F Factory F-1: Moderate Hazard,
F-2: Low Hazard F1, F2
H Hazard H-1 to 7: Depends on the hazardous material handled/stored. H-1 to H-7
I Institutional I-1: Nurseries, hospitals, nursing home.
I-2,I-3: Others I-1 to I-3
M Mercantile Used for display, storage, and sale of merchandise M
R Residential R-1: Hotels or Motels, or boarding Houses
R-2: Multi-family dwellings
R-3: One or Two Family dwelling.
R-4: Child Care R-1 to R-4
S Storage S-1: Moderate Hazard
S-2: Low Hazard
S-3: Repair Garage
S-4: Open Parking Garage
S-5: Air Craft S-1 to S-5
U Utility Building that does not covered by the above groups. U
NFPA မှာတော့ ပလတ်စတစ်၊ ရာဘာ နဲ့ ရာဘာလို ပစ္စည်း မျိုး တွေ ကို ဂုဏ်သတ္တိ ကို လိုက်ပြီး Group A, Group B (သို့) Group C လို့ ခွဲခြား သတ်မှတ် ပါတယ်။ သိုလှောင်တဲ့ (သစ်၊ သတ္တု၊ သစ်သား၊ ပလတ်စတစ်၊ စသည်၊ ) ပစ္စည်း အမျိုးအစား (type) နဲ့ ပမာဏ (amount) ကို လိုက်ပြီး Commodity တွေ ကို Class I to IV လို့ ခွဲခြား သတ်မှတ်ပါတယ်။ ပစ္စည်းအမျိုးအစား တူပေမဲ့ ပမာဏ မတူ ရင် Class တူချင်မှ တူပါမယ်။
British Standard မှာရော အခြား Standards တွေ မှာပါ Class / Categories ခွဲ ခြားမှု တွေ ရှိပါတယ်။ လိုအပ်ရင် ဒီလိုအပ်ချက်တွေ ကို ရှာကြည့်နိုင်ဘို့ အသိပေးတာပါ။
Passive Fire Protectionမှာ ထည့်သွင်း စဉ်းစား ရမဲ့ အချက်တွေ ကတော့
Site Planning & External Fire Fighting Provision
ဒီနေရာ မှာ မှီငြမ်း နိုင်ဘို့ Online References ကောင်း နေရာတစ်ခု ကိုညွှန်း လိုပါတယ်။ Singapore Civil Defence Force (စင်္ကာပူ မီးသတ်တပ်ဖွဲ့) ရဲ့ Publication Website ပါ။
Fire Safety Code စည်းမျဉ်း တွေ ဖြစ်ပြီး စင်္ကာပူ နိုင်ငံ အတွက် Fire Safety Design လုပ်တဲ့ အခါလိုက်နာ ရမဲ့ အချက်တွေ ပါဝင်တာပါ။ ဘယ်နိုင်ငံ အတွက် မဆို ခပ်ဆင်ဆင် မို့ အခြေခံ ကောင်း တစ်ခု ကို ပေးနိုင်လိမ့် မယ် လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။ Free Download လုပ်လို့ရနိုင်တာ မို့ လည်း ညွှန်းရတာပါ။
ပါဝင်တဲ့ အခန်းတွေ ကတော့
Chapter 2: Means of Escape
Chapter 3: Structural Fire Precautions
Chapter 4: Site Planning & External Fire Fighting Provision
Chapter 5: Electrical Power Supplies
Chapter 6: Fire Fighting Systems
Chapter 7: Mechanical Ventilation and Smoke Control Systems
Chapter 8: Other Systems
Chapter 9: Fire Safety Report
ဒီနေရာ မှာ Free Download လုပ်လို့ရတဲ့ လေ့လာ သင့်တဲ့ စာအုပ်တွေ ကတော့
ပထမ ဆုံး ကြည့်တဲ့ သူတွေ အတွက် တော့ Fire Code 2002 Handbooks တွေ ကို ကြည့်စေ ချင်ပါတယ်။ Graphics ရုပ်ပုံတွေ နဲ့ ရှင်းပြထားတာ မို့ ပိုပြီး နားလည် လွယ်ပါလိမ့်မယ်။
Mechanical Engineers တွေ အတွက် အဓိက လေ့လာသင့်တာ ကတော့
သတိပြုဘို့ အချက်ကတော့ ဒီ Fire Code က ဘာတွေလိုအပ်တယ်၊ ဘယ်လို အချိန်မှာ ဘာကို သုံးရမယ် ဆိုတဲ့ လိုက်နာရမဲ့ စည်းမျဉ်းတွေ ကို ရှင်းပြထားတာပါ။ စင်္ကာပူနိုင်ငံ မှာ အဆောက်အအုံ တိုင်းအတွက် လုပ်ရမဲ့ Fire Safety ဒီဇိုင်း အတွက် လိုက်နာရမဲ့ အချက်တွေ ပါဝင်တာသာ ဖြစ်ပြီး Fire Safety System Design Manual မဟုတ်တာ တော့ သတိပြုပါ။
Active Fire Protection Systems တွေမှာ အသုံးပြုလေ့ ရှိတဲ့ စနစ်တွေ ကို အောက်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
Stand pipe / Rising Mains (Wet/Dry Risers) (အထပ်အလိုက် မီးသတ်သမားသုံးရန် မီးသတ် ရေဘုံဘိုင် ခေါင်း)
Automatic Sprinkler System (အလိုအလျှောက် ရေဖြန်း မီးသတ်စနစ်)၊
Gas Fire Suppression / extinguishing Systems ( မီးသတ် ဓာတ်ငွေ့သုံးစနစ် များ၊ Pyrogen, CO2, Inergen, Halon XXX, FM-200, NN100, etc. စသည်၊)
Fire (Heat) / Smoke detection and alarm systems (မီး၊ အပူ နဲ့ မီးခိုး တို့ကို အာရုံခံ အချက်ပေးစနစ်),
Pressurization system (လေဖိအားမြှင့် ပေးသော စနစ်များ)
Smoke Control System Using Natural (Displacement) or Powered (Extracted) Ventilation(မီးခိုး ကိုပြယ်အောင် စုတ်ထုတ်တဲ့ စနစ် ၊ မီးခိုး ကိုထိန်းချုပ်တဲ့ စနစ် များ)၊
Fire Lift (အရေးပေါ် အခြေအနေ တွင် မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ သုံးရန် ဓာတ်လှေကား)
Emergency Power Systems (အရေးပေါ် မီးစက်)
The Fire Engineering - Performance Based Approach (စနစ်တကျ တွက်ချက်၊ Simulate လုပ် ပြီး အဖြေရှာ ရသော စနစ်။)
ဒီ Systems တွေ ရဲ့ အခြေခံတွေ ကို အရင် မိတ်ဆက်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အသေးစိတ် လိုအပ်ချက် တွေ ကိုတော့ နောက်အခွင့်အရေး ရတဲ့ အခါ တစ်ခုစီ တင်ပြပေးသွား မှာဖြစ်ပါတယ်။
Portable Fire Extinguishers ဆိုတာကတော့ အသင့်သုံး မီးသတ်ဘူး တွေ ပါ။ အခြေခံ မီးသတ် ပစ္စည်းဖြစ်ပြီး initial outbreak of fire incident (မီးအစပျိုးစ) အခြေအနေမှာ မီးအရှိန် ပိုကြီးမလာအောင် ထိန်းသိမ်းနိုင်ဘို့ အသုံးပြုပါတယ်။ Fire Extinguisher ကို နည်းလမ်းကျကျ အသုံးချ မှု က ရံဖန်ရံခါ မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ ကို မခေါ်သေးရခင် မှာပဲ မီးကို ထိထိရောက်ရောက် ထိန်းချုပ် ငြိမ်းသတ်နိုင်တာ ကိုတွေ့ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အရှိန်ရ အားကောင်းနေတဲ့ large scale fire တွေ ကို ငြိမ်းသတ်နိုင် ဘို့ အတွက် တော့ မဟုတ်ပါဘူး။ Portable ဆိုတဲ့ အတိုင်း အလွယ်တကူ သယ်ယူ အသုံးပြုနိုင် စေဘို့ လိုအပ်တာ မို့ သိပ်မလေးဘို့ လိုအပ်ပြီး အလေးဆုံး 20kg (44lb) မကျော်ဘို့ လိုအပ်ပါတယ်။
Extinguishers တွေ ကို မီးအစပျိုးတဲ့ အချိန် အလျင်အမြန် ယူသုံး နိုင်ဘို့ အတွက် မြင်သာတဲ့ လွယ်လွယ်ကူကူ ယူသုံးလို့ ရတဲ့ နေရာ တွေ မှာ ထားပေးရပါမယ်။ room exit တံခါးပေါက် နား၊ ကော်ရစ်ဒါ၊ stairways လှေခါးအတွင်း၊ lobby နဲ့ landings တွေ မှာ ထားဘို့ ပိုသင့်ပါတယ်။ the potential fire hazards (မီးလောင်နိုင်မဲ့ ပစ္စည်းတွေ) နဲ့ နီးတဲ့ အနားမှာ လည်းထားပေးရပါမယ်။ မီးလောင်မှု ဖြစ်ခဲ့ရင် ယူသုံးလို့ မရမဲ့ နေရာ မဖြစ်ဘို့တော့ သတိထား ရပါမယ်။
အထက်မှာ ဖော်ပြခဲ့ တဲ့ classification, hazard class နဲ့ fire size ပေါ်မူတည် တွက်ချက် ရွေးချယ်ရ ပါမယ်။
Rating ဆိုတာကတော့ Fire Size လို့ခေါ်တဲ့ မီးတောက် ဘယ်လောက်အား ကို သတ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ အားပါ။ အထဲမှာပါဝင် တဲ့ Fire extinguishing agent ပစ္စည်း ကိုလိုက်လို့ ဒီ Rating ကိုလည်း ဖော်ပြထားလေ့ ရှိပါတယ်။
စကာင်္ပူ CP55:1991 အရ Class A Fire Extinguisher တွေ ကိုရွေးချယ်တဲ့ အခါ A တစ်ယူနစ် က 40m2 for Low Hazard Occupancy, 20for Medium, 15 for high hazard. ဒီ Low, Med, High တွေ က Light, Ordinary, High တွေနဲ့ ဆင်တူပါတယ်။ 200m2 ဧရိယာ ရှိတဲ့ Low hazard အခန်းတစ်ခန်း အတွက် 200 / 40 = 5A လိုအပ်ပါတယ်။ Class A Fire အတွက် အခန်းရဲ့ ဘယ်နေရာ ကနေ ပဲဖြစ်ဖြစ် အနီးဆုံး extinguisher အထိ သွားယူရမဲ့ Maximum travel distance က 15m ပါ။
British Standard နဲ့ မလေးရှား၊စင်္ကာပူ နိုင်ငံ က သာမန် အဆောက်အအုံတွေ မှာ သုံးလေ့ရှိတာ ကတော့ ABC Fire Extinguisher လို့ခေါ်တဲ့ Dry Chemical Type ပါ။ သူက Class A, B, C Fire (in B.S.) တွေ အားလုံးအတွက် အသုံးပြုနိုင်တာ မို့ပါ။ ဒါ့အပြင် Class E (Electrical Fire) အတွက်လည်းအသုံးပြုနိုင်ပါသေးတယ်။ ဒီ ABC Fire Extinguisher နဲ့ ငြိမ်းသတ်ဘို့ ရှောင်ရမှာ ကတော့ carbon disulphite နဲ့ Class D: flammable metal Fire ဖြစ်တဲ့ magnesium and sodium တွေကြောင့် ဖြစ်တဲ့ မီးဖြစ်ပါတယ်။
အပေါ်ကပုံမှာ 6-kg Dry Chemical Fire Extinguisher ပုံတစ်ခုကိုဖော်ပြထားပါတယ်။ သူ့မှာ 27A ဆိုတာနဲ့ 144B ဆိုတာ တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ ဆိုလိုတာက Class A Rating 27 ရှိပြီး Class B Rating က 144 ရှိပါတယ်။ အထက်မှာပြခဲ့တဲ့ ဇယားနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပါ။
လူတစ်ယောက် ထဲ ကိုင်တွယ် အသုံးပြု ရမှာ ဖြစ်တဲ့ အတွက် Portable fire extinguishers တွေ မှာ minimum gross weight but with higher fire rating (အလေးချိန် ပေါ့ပေါ့ နဲ့ အင်အားကောင်းကောင်း) ဖြစ်သင့်ပါတယ်။
Portable fire extinguishers တွေရဲ့ effectiveness ကို ရဘို့ အတွက် နှစ်စဉ် ဂရုတစိုက် ထိန်းသိမ်း စောင့်ရှောက် ပြီး စစ်ဆေး service လုပ်ရပါမယ်။
Potable fire extinguisher တွေ ကိုရှင်းပြချက် နဲ့ အသုံးပြုပုံ နမူနာ ကို လေ့လာနိုင်ဘို့ Weblinks တွေ ကို အောက်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
Classification of Portable Fire Extinguishers, OSHA, U.S.A
Information on Fire Extinguishers, The Fire Safety Advice Centre,, U.K
All You Ever Wanted to Know about Fire Extinguishers, The Hanford Fire Department , U.S.A
တိုးတက်နေတဲ့ နိုင်ငံတွေ ရဲ့ လမ်းဘေး တစ်ဘက်တစ်ချက် နဲ့ အဆောက်အအုံ ခြံဝင်း တွေ ထဲမှာ Fire hydrants လို့ခေါ်တဲ့ မီးသတ်သမားသုံး ရေဘုံဘိုင် ခေါင်း တွေ ကို ပေ ၃၀၀ - ၅၀၀ လောက် စီခြားပြီး ရှိနေတာ တွေ့ ရပါလိမ့်မယ်။ အများအားဖြင့် သင့်တော်တဲ့ ရေဖိအား Pressure ရှိတဲ့ ရေတွေ နဲ့ ကို မီးသတ်တဲ့အခါ အဆင်သင့် လိုသလောက် ရအောင် စီစဉ်ထားတာပါ။
Fire Hydrant နဲ့ အနီးအနား မှာ Firemen တွေပဲ ဖွင့်ခွင့် ပိတ်ခွင့် ရှိတဲ့ Valve Chamber တွေ ပါရှိလေ့ ရှိပါတယ်။ မီးသတ်ကား (သို့) အခြား fire engine တွေ ပိုက်ရေပန်း တွေ နဲ့ မီးကို ဖြန်းသတ်တဲ့ အခါ ဒီ Fire Hydrant တွေကရေ တွေ ကို အခြားတစ်ဘက်ကနေ စုတ်ယူ ဖြည့်တင်း ရပါတယ်။
ဒီ Fire Hydrant ကရေတွေ သင့်တော်တဲ့ ရေဖိအား Pressure မရနိုင် ရင် hydrant pumps တွေ နဲ့ Pressure ပေးရနိုင်ပါတယ်။ ဒီလို Pressurized လုပ်ထား တာကြောင့်လည်း ရုပ်ရှင်တွေ ထဲ မှာ ကားတိုက်မှုပဲဖြစ်ဖြစ်၊ လမ်းပေါ်ကို လေယာဉ်ပဲ ထိုးကျကျ၊ အကောင်ကြီးတွေ ပဲသောင်းကျန်းသောင်းကျန်း ထိခိုက်သွားတဲ့ Fire Hydrant ကရေတွေ မိုးပေါ်ထောင်ပန်း နေတဲ့ မြင်ကွင်းတွေ ကို ရုပ်ရှင် ဒါရိုက်တာတွေ ယုတ္တိရှိရှိ ကူးယူ ဖန်တီး ရိုက်ကူးနေကြ တာဖြစ်ပါတယ်။ အပြင်မှာ တွေ့ရတဲ့ လက်တွေ့ အခြေအနေ တစ်ခု ကို ကြည့်နိုင်ဘို့ အောက်မှာ Link တွေ ပေးထားပါတယ်။
YouTube - Car vs. Fire Hydrant
YouTube - Fire Hydrant Burst
မီးသတ်သမားတွေ Fire Hydrant အသုံးပြုပုံ နမူနာ ကို တော့ YouTube - Fire Hydrant Training မှာ ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
အများပိုင် လမ်းမတွေ ပေါ်က Fire Hydrant တွေ ကို Public Fire Hydrant လို့ခေါ်ပြီး အဆောက်အအုံ ခြံဝင်း တွေ ထဲမှာ ရှိရင်တော့ Private Fire Hydrant လို့ခေါ်ပါတယ်။ မီးလောင်တဲ့ အခါ လွတ်လွတ်ကင်းကင်း မီးသတ်ခွင့် ရနိုင်ဘို့ အတွက် အဆောက်အအုံ နဲ့ မနီးကပ်လွန်းတဲ့ အနည်းဆုံး အကွာအဝေး တစ်ခု [ဥပမာ။ NFPA: ပေ ၄၀ (22.2m)။ မလေးရှား၊ စကာင်္ပူ 6m (ပေ ၂၀ ခန့်)] လိုအပ်လေ့ ရှိပါတယ်။
Private Hydrant တစ်ခုနဲ့ တစ်ခု အများဆုံး အကွာအဝေး သတ်မှတ်ချက် အနေနဲ့ ကတော့ စကာင်္ပူ နိုင်ငံ မှာ 100m ဖြစ်ပြီး မလေးရှား နိုင်ငံ ကတော့ 90m ဖြစ်ပါတယ်။ အခြားနေရာ တွေ မှာ တော့ ဒေသ အလိုက် Authority ရဲ့သတ်မှတ်ချက် ကို လိုက်နာရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
System မှာပါဝင်မှာတွေ ကတော့ လိုအပ်တဲ့ Fire Hydrant အရေအတွက်၊ Hydraulic Pressure နဲ့ Flowrate ရနိုင်မဲ့ Piping Network နဲ့ လိုအပ်ရင် Pump sets & control systems တွေတပ်ဆင် ပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အတွေ့များတဲ့ အမှားတွေ ကတော့ နိမ့်လွန်းတာ၊ မြင့်လွန်းတာ၊ ပိုက်ခေါင်းက သုံးလို့မရတဲ့၊ သုံးရခက်တဲ့ ဘက်လှည့်နေတာ၊ မြင်ကွင်းကပျောက်နေတာ (အပင် သို့ တစ်ခုခု တွေနဲ့ ဖုံးကွယ်နေတာ) တွေဖြစ်ပါတယ်။
အပေါ်က ပုံမှာ နယူးယောက်မြို့က Fire Hydrant တစ်ခုပုံ ကို Wiki ကနေကူးယူ ဖော်ပြထားပါတယ်။ နေရာဒေသ ကို လိုက်လို့ အခြားအရောင် တစ်ခုခုဖြစ်နိုင်သလို၊ ဒီဇိုင်းလည်း ပြောင်းလဲ နိုင်ပါတယ်။ Fire Engine က တိုက်ရိုက် ယူသုံးမှာမို့ Fire Department ရဲ့ လိုအပ်ချက် နဲ့ တော့ ကိုက်ညီရပါလိမ့်မယ်။ L.A (Los Angeles) County တစ်ဝိုက်မှာ တွေ့ရတဲ့ Public Fire Hydrant တွေ ကတော့ အဝါရောင် ဖျော့ဖျော့ ပါ။ နိုင်ငံ အလိုက်၊ မြို့ အလိုက် အသုံးပြုတဲ့ Fire Hydrants အမျိးမျိုး ရဲ့ ပုံ အချို့ ကို လေ့လာနိုင်မဲ့ Website တစ်ခုကို အောက်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
Hose reel ဆိုတာကတော့ အရေးပေါ် မီးအစပျိုးတဲ့ အချိန်မှာ အဆောက်အအုံ အထဲမှာ ရှိတဲ့ သူတွေ အသုံးပြုနိုင်ဘို့ ထားပေးရတဲ့ မီးသတ် ရေပိုက် တစ်မျိုးပါ။
လိုအပ်တဲ့ ရေအား (Pressure + Flowrate) ရဘို့အတွက် လိုအပ်ရင် hose reel pumps, fire water storage tank, hose reels, pipe work and valves တွေထည့်ပေးရပါမယ်။
ထားမဲ့နေရာ ရဲ့လိုအပ်ချက်ကို လိုက်ပြီး Cabinet (ပုံး) Compartment (အခန်းကန့်) အတွင်းမှာ ပဲ ဖြစ် နိုင်သလို အခန်းထဲမှာ အရှိအတိုင်း expose လည်း ပဲဖြစ် နိုင်ပါတယ်။
အရေအတွက် ကိုရွေးချယ်တဲ့ အခါ Coverage ကို မူတည်ပြီး စဉ်းစားရပါတယ်။ ပုံမှန်ကတော့ Standard hose ရဲ့ အရှည် နဲ့ ရေပန်းအကွာအဝေး ဖြစ်ပြီး ကြိုတင် သတ်မှတ်ထားလေ့ ရှိပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ အများစုက Coverage ကိုစက်ဝိုင်း နဲ့ ဆွဲကြည့်တတ် ကြပေမဲ့ တကယ့် လိုအပ်ချက်အရ ဆိုရင်တော့ လူသွားလို့ ရတဲ့ လမ်းကြောင်း ကနေ တိုင်းတာရ မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Singapore Civil Defense Fire Codes တွေထဲ က Chapter6မှာကြည့်ပါ။
Hose reels တွေကို အထဲမှာ ရှိနေတဲ့ သူတွေ အသုံးပြုနိုင်ဘို့ ရည်ရွယ်တဲ့ အတိုင်း သုံးတဲ့ သူ အန္တရာယ် ကင်းကင်း နဲ့ လွယ်လွယ်ကူကူ နီးနီးနားနား ယူသုံးနိုင် ဘို့ က အရေးကြီးပါတယ်။ ယေဘုယျ အားဖြင့် along escape routes (သို့) Fire exit နားမှာ ထားပေး ရ ပါမယ်။ မီး မတော်တဆ စဖြစ်တဲ့ အချိန် မှာ ထွက်ခွာလာ ကြတဲ့ လူတွေ အဆင်သင့် အသုံးပြု နိုင်မှာပါ။
အထူးသဖြင့် ရုံးခန်းတွေ မှာ တော့ Lift or Stair Lobby ကိုထွက်တဲ့ Fire exits နဲ့ ကပ်ရက်မှာ ထားထား ပေးရပါမယ်။ ဒါမှ Lobby ရဲ့ Smoke Stop Doors တွေ ကို မဖွင့်ပဲ သုံးနိုင်မှာ မို့ Lobby ထဲမှာ မီးခိုးတွေ နဲ့ ပြည့်လာမဲ့ အခြေအနေ ကို ကာကွယ် နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အသုံး များတဲ့ Hose ကတော့ 30m Hose ပါ၊ ပုံမှန် Hose nozzle က နေ 6-m အကွာအဝေး ကို Coverage လို့သတ်မှတ် ပေမဲ့ အများအားဖြင့် 30m နဲ့ မှန်းပြီး လျာထားလေ့ ရှိပါတယ်။ ပုံမှန် အားဖြင့် Architect က နေရာ ချပေးတာပါ။ ဒါကို လည်း နိုင်ငံ၊ မြို့ အလိုက်၊ Regulation နဲ့ပြန် စစ်ဘို့ လိုအပ်ပါလိမ့် မယ်။
NFPA သုံးတဲ့ စနစ် မှာတော့ သူ့ကို Standpipe Class II အနေ နဲ့ တွေ့ရပြီး Standpipe (or) Fire Sprinkler နဲ့ တွဲသုံးတာ တွေ့မိပါတယ်။ ခပ်ဆင်ဆင် ဆိုပေမဲ့ အနည်းငယ် အသုံးနဲ့ configuration ခြားနားမှု တော့ အနည်းငယ် ရှိပါတယ်။
Standpipe / Rising Mains
Rising Mains ဆိုတာကတော့ Firemen တွေ အသုံးပြုဘို့ တပ်ဆင်ထားတဲ့ Internal Hydrants တွေပဲ ဖြစ်ကြပါတယ်။ သူ့ရဲ့ အခြားအခေါ်အဝေါ် ကတော့ Standpipe ပါ။ NFPA မှာ တော့ Standpipe လို့ပဲသုံးပါတယ်။ အဓိကသုံးတဲ့ Types ကနှစ်ခုရှိပါတယ်။
Dry(Dry Rising Mains / Dry Risers)
Wet (Wet Rising Mains / Wet Risers)
Dry Riser ဆိုတာ ကပုံမှန် ရေဖြည့်မထားတဲ့ ပိုက်တွေ မို့ ခေါ်တာပါ။ သူ့ကို Fire Engine တွေကတစ်ဆင့် ရေဖြည့်ပြီး အသုံးပြုရပါတယ်။ Wet Riser တွေကတော့ Pressurized Water နဲ့ဖြည့်ထားတာပါ။ စင်္ကာပူ၊ မလေးရှား မှာသုံးတဲ့ Landing Valves တွေရဲ့ Hose connection size က 65mm (2-½”) ဖြစ်ပါတယ်။ NFPA မှာတော့ 1-½” နဲ့ 2-½” ရှိပါတယ်။
ပုံမှန်အားဖြင့် Wet riser system တွေမှာ ပါဝင်တာတွေ ကတော့
Riser ပိုက်ထဲ ရေမောင်းထည့်ပေးဘို့ duty fire pump with standby pump တွေ
150mm diameter riser pipe နဲ့ အထပ်တိုင်း မှာ Canvas Hose ချိတ်ဆက် Connect လုပ်ဘို့ Landing Valves တွေ
မီးလောင်ရင် ပက်ဖြန်းဘို့ Canvas Hoses with nozzles တွေ
Canvas Hose တွေချိတ်တင်၊ ထားဘို့ အတွက် Hose cradle တွေ
System pressure ကို maintain လုပ်နိုင်ဘို့ အတွက် jockey pump လို့ခေါ်တဲ့ Pump အသေးစားလေးတွေ
Wet Riser stage တစ်ခုစီ အတွက် အမြင့်သတ်မှတ်ချက် လည်းရှိပါတယ်။ စကာင်္ပူမှာ 120m အထိ ခွင့်ပြုပြီး မလေးရှား မှာ တော့ 60m အထိသာ သတ်မှတ်ထားပြီး ခြွင်းချက်နဲပ ခွင့်ပြုရင်တောင်မှ 70.15m အထိပဲ အများဆုံးထားခွင့် ရှိပါတယ်
ဒီနေရာမှာ ကြုံလို့ Breeching Inlet လို့ခေါ်တဲ့ Fire Department Connection အကြောင်းကို ပြောပြလိုပါတယ်။ ဒီ Inlet တွေကို Fire Appliances Access နဲ့ ကပ်ရက်မှာ ထားပေးထားရ ပါတယ်။ လိုအပ်လို့ ရှိရင် အပြင်ကနေ ရေဖြည့်ပေးလို့ ရအောင်ပါ။ Dry Rising Mains တစ်ခုတည်း မှာသာ မဟုတ်ပဲ ရေသုံးတဲ့ စနစ် တွေဖြစ်တဲ့ Automatic Sprinkler Systems နဲ့ Wet Rising Main System တွေ မှာပါ ပါရပါတယ်။ ခြားနားချက် ကတော့ Dry rising mains က ဒီ Fire department connection ကိုလုံးလုံး အမှီပြုနေရတာပါ (မှတ်ချက်၊ ၊ ရေခဲလောက်အောင် မအေးသော နိုင်ငံ များအတွက်။)
ဘယ်အခြေအနေ မှာ ဘယ်စနစ် ကို လိုအပ်တယ် ဆိုတာ ကတော့ အဆောက်အအုံ ရဲ့ အမြင့်ပေါ် မူတည်ပြီး သတ်မှတ်လေ့ ရှိပါတယ်။ ဒီအမြင့် ကို သတ်မှတ်တဲ့ အခါ fire appliance access level လို့ခေါ်တဲ့ မီးသတ်ယာဉ် ရပ်တဲ့ နေရာ ကို Base ထားပြီး တိုင်းတာ ရပါတယ်။
18.3 meters မှ 30.5 meters အထိ: Dry Riser
Above 30.5 meters: Wet Riser
Wet Riser: 60 to 70.15m/ Stage
above 24m (general) /10m (Purpose group II - Other residential)မှ 60m အထိ: Dry Riser
Above 60m : Wet Riser
Wet Riser: 120m/ Stage
အပေါ်ဆုံးထပ် က ပေ ၃၀ ထက် ပိုမြင့်နေရင် (သို့)
မြေအောက် အောက်ဆုံးထပ်က ပေ ၃၀ ထက် ပို နိမ့်နေရင်၊
Fire department vehicle access နဲ့ ပေ ၄၀၀ ထက်ပို ဝေးနေရင် (ခြွင်းချက်။ Sprinkler Protected (or) less than 10,000 sqft (or) BOCA: Group A-4, A-5, F-2, R-3, S-2and U. )
Stages ofatheater, auditorium, etc. where props are prepared and used.
ဖြစ်ခဲ့ရင် Standpipe တွေ ထည့်ပေးရပါမယ်။ ပြီးတော့ အောက်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ ဘောင်ထဲ မဝင်ရင် Wet System သုံးသင့်တယ် လို့ သတ်မှတ်ထားပါတယ်။
၇၅ ပေ အောက် အဆောက်အအုံ
ပေ ၁၅၀ အောက် Automatic Sprinkler Protected Building
ပေ ၁၅၀ အောက် Open Parking Structure
Standpipe တွေ ကို Classes သုံးခု ခွဲခြားထားပါတယ်။
Class I : 2-½” Hose Station for use by the fire department
Class II : 1-½” Hose Station for use by the occupants of the building or the fire department
Class III: Both Class I & Class II hoses
ဒီမှာပါတဲ့ Class II ကို မလေးရှား၊ စကာင်္ပူ နဲ့ British Standard မှာ Hosereel System အနေ နဲ့ သီးသန့် တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သဘာဝ ခြားနားချက် အနည်းငယ်တော့ ရှိပါတယ်။
Systems တွေကို Wet, Dry နဲ့ Manual ရယ်လို့ သုံးမျိုး Classified လုပ်ထားပါတယ်။ သူ့ရဲ့ Dry Systems ဆိုတာ က ပုံမှန်အခြေအနေ မှာ Compressed Air ဖြည့်ထားတာဖြစ်ပြီး လိုအပ်ရင် ရေကို Automatically ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ Semi-automatically ပဲဖြစ်ဖြစ် မောင်းထည့်ပေး ရပါတယ်။ Manual ဆိုတာ ကတော့ Fire Department က လိုအပ်သလို (wet/dry) အသုံးပြုဘို့ အတွက် သီးသန့် တပ်ဆင် ပေးရတာပါ။
Automatic sprinkler system ဆိုတာကတော့ Water Supply,anetwork of pipes, sprinkler heads, and other components တွေ ပါဝင်ပြီး အဆောက်အအုံ ထဲမှာ Temperature (or) Smoke Level ကို Detect လုပ်နေပြီး၊ ကြိုတင် သတ်မှတ်ထား တဲ့ စိုးရိမ် အမှတ်ရောက် တဲ့ အခါ အလိုအလျောက် မီးကိုငြိမ်းသတ် ပေး၊ လူတွေကို လည်း wanring လုပ်ပေး နိုင် မဲ့ Integrated Fire Suppression System တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။
ပုံမှန် Fire Sprinkler Systems တွေမှာ ပါဝင်နိုင်တာ ကတော့ fire pumps, water storage tanks, control valve sets, sprinkler heads, flow switches, pressure switches, pipework and valves တွေပါ။ ဒီ System က လူဝင်ပါစရာ မလိုပဲ သူ့အလိုလို automatically operates လုပ်နိုင်ပါတယ်။
ရိုးရိုး Sprinkler Head သတ်မှတ်ထားတဲ့ အပူချိန် တစ်ခု မှာ အပူ ကြောင့် ကွဲနိုင်တဲ့ liquid filled glass bulb ပါဝင်ပြီး၊ ဒီလိုကွဲတဲ့ အခါ ပိတ်ထားတဲ့ အဆို့ ပွင့်သွား ပြီး အထဲမှာ ရှိတဲ့ Pressurized (ဖိအားမြင့်) ရေတွေ ကို သူ့အနားတစ်ဝိုက် ကို အလိုလို ပက်ဖြန်းငြိမ်းသတ် ပါတော့တယ်။ လိုအပ်တဲ့ အပူချိန်ကို ရောက်တဲ့ မီးနဲ့ နီးတဲ့ နေရာက Sprinkler တွေပဲ Operate လုပ် (ကွဲပြီးရေဖြန်း) မှာပါ။
Bulb shatters when Operating temperature is reached Water is discharged onto the seat of the fire
အောက်မှာ Sprinkler Systems တွေကို ခွဲခြားပြထားပါတယ်။
Wet pipe installation : sprinkler bulb ကွဲတဲ့ အခါ အဆင်သင့် ပန်းထွက်နိုင်အောင် Pipework ထဲမှာ ဖိအားနဲ့ ရေဖြည့်ထား တဲ့ Installation ဖြစ်ပါတယ်။
Dry pipe installation : ပိုက်ထဲမှာ Compressed Air နဲ့ဖြည့်ထားပြီး sprinkler bulb ကွဲတဲ့ အခါ ပထမ လေ တွေထွက် လာမယ် ပြီးရင် ပိုက်ထဲကို ရေဝင်လာပြီး Sprinkler Head ကနေ ရေ ပန်းထွက်နိုင်အောင် လုပ်ထားတဲ့ Installation ဖြစ်ပါတယ်။
Pre-action installation : သူလည်း ပိုက်ထဲ ကို Compressed Air နဲ့ဖြည့်ထားပြီး smoke or heat detectors က မီး၊ မီးခိုး ကို Detect လုပ်တွေ့ တဲ့ အခါ ဒီပိုက်တွေ ထဲကို ရေဖြည့်ပြီး အဆင်သင့် ပြင်ထားပါတယ်။
ရေ ကတော့ sprinkler bulb ကွဲတဲ့ အခါ မှ သာ Sprinkler Head ကနေ ရေ ပန်းထွက် မှာပါ။
Deluge installation : Sprinkler မှာ bulb မပါပါဘူး၊ အပွင့်ပါ။ fire ကို detected တဲ့အခါမှာ the deluge valve ကို လျင်လျင်မြန်မြန် အလိုလိုဖွင့်ပေးမှာ ဖြစ်ပြီး Sprinkler heads တွေ အားလုံးကနေ တစ်ပြိုင်နက် ထဲ ထုတ်လွှတ် ပက်ဖြန်း မှာဖြစ်ပါတယ်။
Wet pipe installation က အသုံးအများ ဆုံးပါ။ တွေ့ရလေ့ရှိတဲ့ Wet pipe installation Typical Arrangement ပုံစံ ကို အောက်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
အောက်မှာ သုံးလေ့ရှိတဲ့ နေရာ နဲ့ Architectural လိုအပ်ချက် ကို ဖြည့်ပေးနိုင်မဲ့ Sprinkler Heads ပုံစံ အမျိုးမျိုး ကို ဖော်ပြထားပါတယ်။
ဒီလို အသုံးများတဲ့ Sprinkler Heads တွေ ကို လိုအပ်ချက် အလိုက် သိချင်ရင် Victaulic Company ရဲ့ Automatic Sprinkler Product Reference (pdf) မှာ လေ့လာနိုင်ပါတယ်။ ဒီလို လေ့လာတဲ့ အခါ ရှာကြည့်စေချင် တာ ကတော့
Response Category (Standard, Quick, Open, ESFR)
K-Factors ( S.I / I.P unit dependent)
Temperature Rating [e.g. 68°C(Most commonly used) and 79°C (Kitchen) etc.]
ကိုယ်သုံးမဲ့ Hazard Class နဲ့ Application လိုအပ်ချက် ပေါ်မူတည် ပြီး သုံးရမဲ့ Sprinkler Head ကို သေချာ စိစစ် ရွေးချယ်ရပါတယ်။
Architectural အမြင်ပန်း လှဘို့ လိုအပ်တဲ့ နေရာတွေ မှာလည်း လိုက်ဖက်တဲ့ Sprinkler အမျိုးအစား ကို ရွေးချယ် နိုင်ပါတယ်။
Hazard Class အကြောင်းကို အထက်မှာ တင်ပြခဲ့ပါတယ်။ Hazard Class အလိုက် လိုအပ်တဲ့ ရေထွက်အား နဲ့ AMAO (Assumed Area of Operation) လို့ခေါ်တဲ့ မီးလောင်ရင် အများဆုံး ကာကွယ်ရမဲ့ ဧရိယာ ခန့်မှန်း ချက် က လည်း ကွဲပြားခြားနား ပါလိမ့်မယ်။ သက်ဆိုင်တဲ့ Pump Capacity နဲ့ Water Storage Capacity တွေ လည်း ကွဲပြားခြားနား ပါတယ်။
Hazard Class အလိုက် Sprinkler Head တစ်ခု ကနေ ကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့ Area ကိုလည်း သတ်မှတ် ပေးထား ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် Sprinkler တစ်ခုနဲ့ တစ်ခုကြား ရှိရမဲ့ အကွာအဝေး ကိုလည်း သတ်မှတ် ထားပါတယ်။
K-Factor ကတော့ sprinkler ကနေဖွင့်ပေးမဲ့ Orifice ရဲ့ အရွယ်အစား ပါ။ K factor ကြီးရင် Orifice ကြီးတာမို့ ပန်းထွက်တဲ့ ရေအားလည်း များပါတယ်။ ဒီတန်ဘိုး က သုံးမဲ့ application နဲ့ hazard class ပေါ်မူတည်ပြီး ရွေးချယ်ရတာပါ။
Sprinkler Head ကိုရွေးချယ်တဲ့ အခါ အခန်းရဲ့ အပူချိန် နဲ့ သုံးမဲ့ application ကို လိုက်ပြီး Temperature Rating ကို သတ်မှတ်ပါတယ်။ ပုံမှန်အားဖြင့် အခန်းအပူချိန် ထက် 30°C (54°F) လောက် လို့သတ်မှတ် ကြပါတယ်။ Sprinkler Bulb တွေရဲ့ temperature rating ကို color code နဲ့ခွဲထားလေ့ ရှိပါတယ်။
အောက်မှာ Victaulic Company ရဲ့ Automatic Sprinkler Product Reference ကနေ ထုတ်ယူထားတဲ့ Sprinkler rating တွေကို ဖော်ပြထားပါတယ်။
Part ID Nominal
Ambient Temp. Allowed Glass Bulb Color
A 135°F/57°C 100°F/38°C Orange
C 155°F/68°C 100°F/38°C Red
E 175°F/79°C 150°F/65°C Yellow
F 200°F/93°C 150°F/65°C Green
J 286°F/141°C 225°F/107°C Blue
K 360°F/182°C 300°F/149°C Purple
M Open –– No Bulb
All glass bulbs are rated for temperatures from -67°F/-55°C up to those shown in adjacent table.
Manufacturer တစ်ခု နဲ့တစ်ခု product code လုပ်ပုံ တူချင်မှ တူပါမယ်။ Viking ကတော့ သူ့ရဲ့ Product Code ကို Temperature Suffix (°F/°C): 135°/68° = A, 155°/68° = B, 175°/79° = D, 200°/93° = E, 212°/100° = M, 286°/141° = G, 360°/182° = H, 500°/260° = L, OPEN = Z (Teflon® only) လို့ သတ်မှတ်ထား ပါတယ်။
NFPA 13 အရဆိုရင်တော့
Maximum Ceiling Temperature Temperature Rating Temperature Classification Color Code (with Fusible Link) Glass Bulb Color
100°F / 38°C 135-170°F /
57-77°C Ordinary Uncolored or Black Orange (135°F) or
66°C 175-225°F /
79-107°C Intermediate White Yellow (175°F) or
107°C 250-300°F /
121-149°C High Blue Blue
149°C 325-375°F /
163-191°C Extra High Red Purple
191°C 400-475°F /
204-246°C Very Extra High Green Black
246°C 500-575°F /
260-302°C Ultra High Orange Black
625°F / 329°C 650°F /
343°C Ultra High Orange Black
BS 5306 မှာဖော်ပြထားတဲ့ Color Code ကလည်း NFPA နဲ့ ဆင်ပါတယ်။
အသုံးအများ ဆုံး ကတော့ standard temperature rating ဖြစ်တဲ့ 155°F/68/°C ဖြစ်ပြီး အနီရောင် ပါ။
အခန်းရဲ့ အမြင့် က သိပ်မြင့်လွန်း ရင် ရိုးရိုး sprinklers heads က သိပ် မထိရောက် တော့ပါဘူး။ ဒီအခြေအနေ တွေ မှာ early response sprinkler heads, large droplet sprinkler heads (သို့) deluge systems တွေကို စဉ်းစားရပါလိမ့်မယ်။ ဒီအမြင့် ရဲ့သတ်မှတ် ချက် ကိုတော့ သက်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံ ရဲ့ Code Regulation နဲ့ တိုက်ဆိုင် စစ်ဆေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Sprinkler head တွေမှာ Spray Pattern ဆိုတာ ရှိပါတယ်။ နမူနာ ပုံ နဲ့ web link ကိုအောက်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ ဒီ pattern တွေ ကို သုံးရလောက်အောင် လိုအပ်ချက် ရှိလေ့မရှိပေမဲ့ သိထားသင့်တယ် ထင်လို့ ထည့်လိုက်ရတာပါ။
စိတ်ဝင်စား တယ်ဆိုရင် အောက်မှာ ပြထားတဲ့ စနစ်တွေ ကို လည်းရှာဖွေ လေ့လာ ဘို့ တိုက်တွန်းလိုပါတယ်။
စကာင်္ပူ၊ မလေးရှား နိုင်ငံ မှာ ဒီဇိုင်း လုပ်မယ် ဆိုရင် အောက်က အဆင့် တွေ လိုအပ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ (References တွေ အရ Australia နဲ့ U.K မှာလည်း အလားတူ ပဲ လို့ သတ်မှတ်လို့ ရပါတယ်။)
Water Source [ Pump Suction Tank, Gravity Tank, etc. ]
Maximum area of Zone Protected by Each Alarm Valve [New Requirements in Singapore](or) Maximum Sprinklers per Alarm Valve [Obsolete in Singapore]
Gaseous fire suppression systems (ဓာတ်ငွေ့သုံး မီးသတ် စနစ်များ) ဆိုတာကတော့ inert gases တွေနဲ့ chemical agents (မီးသတ်ပစ္စည်း၊ ဓာတ်ငွေ့) တွေ ကို အသုံးပြုပြီး မီးငြှိမ်းသတ် တဲ့ စနစ်တွေ ကို ခေါ်တာပါ။
Electrical Equipments တွေ ကြောင့် ဖြစ်တဲ့ (NFPA Class C / BS Class E Fire) တွေ ကိုငြှိမ်းသတ်ဘို့ အတွက် ပိုထိရောက်ပါတယ်။
ဒီလိုသုံးတဲ့ Agent (Gas) အများစု ကို အရည် (Liquid State under high pressure) နဲ့ သိုလှောင် ထားလေ့ရှိပြီး အချို့ အမျိုးအစား တွေကို တော့ High Pressure Compressed Gas အနေနဲ့ သိုလှောင်ထားလေ့ ရှိပါတယ်။ ဒီစနစ်မှာ ပုံမှန် ပါလေ့ရှိတာတွေ ကတော့
agent storage containers (cylinders)
agent release valves
fire detection system (wiring control panel, actuation signaling),
agent delivery piping, and
agent dispersion nozzles.
မီးကို Fire Detection System က Detect လုပ် တွေ့ရှိ တဲ့အခါ ရှိနေတဲ့ လူတွေကို အသိပေး ဘို့ warning sign / signal လုပ်ပြီး တော့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ အချိန် Delay ရောက်တဲ့ အခါမှာ တော့ ဒီစနစ် က agent dispersion nozzle ကနေ ဒီ agent တွေကို ထုတ်လွှတ်ပေး ပါလိမ့်မယ်။
Agent အမျိုးအစား ကတော့ အဓိက သုံးမျိုးရှိပါတယ်။
The Carbon dioxide system: CO2 ကို အရည်ပုံစံ နဲ့ Pressurized Tanks (Cylinders) တွေထဲမှာ သိုလှောင် ထားပါတယ်။ Nozzles တွေကနေ CO2 ထုတ်လွှတ်တဲ့ အခါ အရည်ကနေ အငွေ့ပြန်ပြီးတော့ မီးကို အပူကိုလည်း စုတ် Oxygen ကိုလည်း လျော့ကျစေပြီး မီးကိုငြိမ်းစေပါတယ်။ ဒီလို Evaporate ဖြစ်တဲ့ အတွက် Heat Absorption: 120 BTU / lb.of gas ရှိပါတယ်။ ဒီစနစ် ထိထိရောက်ရောက် ဖြစ်နိုင်ဘို့ ကတော့ အလုံပိတ်ထားတဲ့ အခန်းဖြစ်ဘို့ လိုပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီစနစ်မှာ Fire Detection ဖြစ်တာနဲ့ Ventilation အလိုလိုပိတ်ပေးမဲ့ စနစ်တွေ၊ Automatic Curtain တွေ ပါဝင်ရပါတယ်။ လေထဲမှာ CO2 များရင် အသက်ရှု ကြပ်စေ ပါတယ်။ လေထဲမှာ CO2 အတိုင်းအဆ 10% ထက်ပိုပါရင် လူကို မူးမေ့သွားစေ နိုင်ပါတယ်။
ဒီစနစ် ကဓာတ်ငွေ့ ကို Discharge မလုပ်ခင် လူတွေ အခန်းထဲက နေ Evacuate လုပ်ခွင့် ရအောင် Visual and Audio Alarm နဲ့ သတိပေးပြီး Time delay အချိန်ပေးပါတယ်။ ဒီစနစ် တွေကို electrical transformer rooms, switchrooms and standby generator rooms တွေ မှာထားပေး လေ့ရှိပြီး လူတွေပုံမှန် ရှိနေလေ့ရှိတဲ့ အခန်းတွေ မှာ တော့ မသုံးသင့်ပါဘူး။ CO2 Fire Extinguishing System for Electrical Rooms
Halogenated gas ဆိုတာကတော့ Fluorine, Chlorine, Bromine, or Iodine စတဲ့ halogen တစ်မျိုးမျိုး ပါဝင်တဲ့ ဓာတ်ငွေ့ တွေကို ခေါ်တာပါ။ အရင်တုန်းက အသုံးအရမ်းများ ခဲ့တာ ကတော့ Halons 1211 နဲ့ Halon 1301 ပါ။ ဒါပေမဲ့ ဒီဓာတ်ငွေ့ တွေရဲ့ Ozone depletion property ဖြစ်တဲ့ ODP (Ozone Depletion Potential) များတာ ကြောင့် သုံးဘို့ ပိတ်ပင် ခဲ့ကြ ပြီး အခြား Alternatives အမျိုးမျိုး နဲ့ အစားထိုး ခဲ့ကြပါတယ်။ အဲဒါတွေ ကတော့ FE-13 (Trifluoromethane), FE-25 (Pentafluoroethane), FM-100 နဲ့ FM-200 တွေဖြစ်ပါတယ်။ ဒါအထဲ မှာ FM-200 ကလွဲလို့ အခြားဓာတ်ငွေ့ တွေရဲ့ ODP က များနေဆဲ မို့ တဖြည်းဖြည်း နဲ့လျှော့ချရမဲ့ အထဲမှာ ပါနေပါတယ်။ အခြားပြဿနာ ဖြစ်တဲ့ လေထဲမှာ နှစ်ပေါင်းများစွာ မပြိုမကွဲ တည်ရှိ နေနိုင်တဲ့ atmospheric life ရှည်တာရယ်၊ Global warming potential (GWP) များတာတွေ ရယ် က FM-200 အပါအဝင် Halogenated gas တွေအားလုံး ကို ပိတ်ပင်ပစ် ဘို့ဖြစ်လာတော့ တာပါပဲ။အထူးသဖြင့် Green Building တွေမှာ Halon နဲ့ CFC ပါတဲ့ Agent တွေ ကို မသုံးဘို့ ကန့်သတ်လာတာ တွေ့ရပါတယ်။
FE-13 (also known as Trifluoromethane, HFC-23, CHF3)
FE-25 (also known as Pentafluoroethane, HFC-125, C2HF5),
FE-232 (also known as Dichlorotrifluoroethane HCFC-123 , C2HCl2F3 )
FM200 Fire Extinguishing Systemfor Computer Rooms
Atmospheric Gas Blend တွေကတော့ လေထဲမှာ သဘာဝအတိုင်းရှိ နေနိုင်တဲ့ ဓာတ်ငွေ့ တွေပါဝင်တဲ့ စနစ်ပါ။ Argon, Nitrogen တွေကို အဓိကပေါင်းစပ် ထားကြပြီး တစ်ခါတစ်ရံ Carbon dioxide ကိုပါထည့်သွင်း blend လုပ်ထားတတ် တဲ့ Agent တွေပါ။ ခုအသုံးများလာတာ ကတော့ NN100, Inergen & Argonite တွေဖြစ်ကြပါတယ်။ ဒီစနစ်တွေ က ပိုပြီးထိရောက် အကျိုးရှိစေတာ မှန်ပေမဲ့ Halogenated စနစ် တွေနဲ့ ယှဉ်ကြည့် ရင် Gas / volume of space ပိုပြီး လိုအပ်ပါတယ်။ ဥပမာ NN100 စနစ် က FM-100 စနစ်ထက် Storage Cylinders အရည်အတွက် ပိုပြီး လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်နေရာ လည်းပိုလို အပ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီ ဓာတ်ငွေ့တွေ သဘာဝ နဲ့ သဟဇာတဖြစ်တဲ့ ဓာတ်ငွေ့တွေပါ။ (GWP=0, ODP=0) ဖြစ်လို့ Ozone Depletion Potential မရှိသလို Global warming potential လည်းမရှိပါဘူး။
Theory:Fire Tetrahedron နဲ့ ကြည့်မယ် ဆိုရင် တွေ့ရမယ့် ငြှိမ်းသတ်ပေးပုံတွေ ကတော့
Reduction of heat (အပူကို လျှော့ချခြင်း) : Representative agents: Novec 1230.
Reduction or isolation of oxygen (လေထဲမှ အောက်ဆီဂျင်ပါဝင် နှုန်းလျှော့ချခြင်း) : Representative agents: Argonite / IG-55, carbon dioxide, Inergen, and NN100.
the chain reaction ကိုထိန်းချုပ်ခြင်း : Representative agents: FE-13, FE-227, FE-241, FE-25, FE-36, FM-200, Halons, Halon 1301, Freon 13T1, NAF P-IV, NAF S-III, and Triodide (Trifluoroiodomethane).
မီးလောင်မှု ဖြစ်တဲ့ အခါ မထိန်းချုပ် နိုင်လောက်အောင် ကြီးထွားမလာသေးခင် သင့်တော်တဲ့ ငြှိမ်းသတ်မှု လုပ်ခွင့်ရအောင် မီးလှန့် သတိပေးနိုင်ဘို့ Fire detection and alarm systems တွေကို ဒီဇိုင်း လုပ်ထားတာပါ။
အဆောက်အအုံ တစ်ခုချင်းစီ မှာ မီးအန္တရာယ် နဲ့ ကူးစက်နိုင်မှု ပြဿနာ အစုလိုက်ရှိနေတတ် လို့ ဒီလို လူတွေရဲ့ အသက်နဲ့ စည်းစိမ်ကို ကာကွယ် ဘို့ အဓိက ရည်ရွယ် ထား တဲ့ စနစ်တွေ ကို လုပ်ရတဲ့ Designer တွေ အတွက် တာဝန်ကြီးပါတယ်။ ဒါကြောင့် အ ဆောက်အအုံ တစ်ခုချင်းစီ အလိုက် လိုအပ်ချက် ကို ဖြည့်ဆီးနိုင်အောင် ဒီဇိုင်း လုပ်ပေးနိုင်ဘို့ က အရေးကြီးပါတယ်။
လူကပဲဖြစ်ဖြစ် Automatic Devices တွေကနေပဲ ဖြစ်ဖြစ် မီးလောင် တာကို တွေ့ရှိတဲ့အခါ အဆောက်အအုံ ရဲ့ management က အခြေအနေ ကိုဆန်းစစ်၊ ပြီးတော့ Activating Building Fire Alarm System, Total or partial evacuation အတွက် ညွှန်ကြားပေးဘို့ နဲ့ လိုအပ်ရင် မီးသတ်ဌာန ကိုသတင်းပို့ ဘို့ အစရှိတဲ့ သင့်တော် တဲ့ တုန့်ပြန်မှု actions တွေကို လုပ်ဆောင်ရပါတယ်။ အဆောက်အအုံကြီးတွေ မှာ အလိုအလျောက် တုန့်ပြန် နိုင်တဲ့ Automatic Sensing (Detecting) Devices တွေ နဲ့ အတူ Automatic Alarm နဲ့ Signaling Systems တွေ ပါဝင်ဘို့ Fire Code တွေ မှာသတ်မှတ် ထားလေ့ရှိပါတယ်။
Detection & Signaling devices တွေက addressable နဲ့ nonaddressable လို့ နှစ်မျိုးရှိပါတယ်။ Addressable type ကတော့ သူတို့ရဲ့ သီးသန့် address က နေ သက်ဆိုင်တဲ့ initiating devices’ location တွေကို ပေးပါလိမ့်မယ်။
Manual Alarm Station (Manual Call Point)
Visual Annunciation Devices
အရေးပေါ် အခြေအနေ မှာ လူတွေ ထွက်ခွာ နိုင်မဲ့ လမ်းကြောင်း တွေ ဖြစ်တဲ့ Protected Escape Routes တွေ ကို မီးခိုးကင်းနေစေဘို့ အတွက် အရေးပေါ် အခြေအနေ မှာ Fresh Air တွေကို ဖိမှုတ်သွင်း ပြီး positive pressure ရအောင် လုပ်ပေးထား တာ ကို ဆိုလိုပါတယ်။ Protected routes ထဲမှာ ပါဝင်နိုင်တာ တွေ ကတော့ staircases, lobbies and in some cases, the corridor တို့ ဖြစ်ကြပါတယ်။
သက်ဆိုင်ရာ bylaws အရပဲဖြစ်ဖြစ်၊ လက်ခံနိုင်တဲ့ Standard အရပဲ ဖြစ်ဖြစ် လုံလောက်တဲ့ သဘာဝ Natural Ventilation ကိုပေးနိုင်ခဲ့မယ် ဆိုရင် တော့ Pressurization system မတပ်ဆင်ပေးလို့ ရကောင်းရနိုင်ပါတယ်။
ဒါကိုတွက်ချက် တဲ့ အခါ လိုအပ်တဲ့ Pressure Level, ဖွင့်ထားမဲ့ တံခါး အရေအတွက် နဲ့ သူကနေစီးထွက် သွားမဲ့ Air Flowrate, ပိတ်ထားတဲ့ တံခါးအရေအတွက် နဲ့ တံခါးကြားကနေ စိမ့်ထွက်သွားမဲ့ Air Flowrate, တံခါးဖွင့်ဘို့ လိုအပ်တဲ့ အား နဲ့အတူ အခြား losses တွေကို ထည့်သွင်းစဉ်းစား ပေးရပါတယ်။
Smoke Control System Using Natural (Displacement) or Powered (Extracted) Ventilation
မီးခိုးတွေ ပိတ်လှောင်မနေ အောင်၊ မီးခိုးတွေ ကို ထုတ်ပစ်တဲ့ နည်းပါ။ လိုအပ်ချက် နဲ့ အခြေအနေ ကို လိုက်ပြီး
Natural (displacement of exhaust) ventilation: သဘာဝ အတိုင်းထွက်ခွင့် ရအောင် လုပ်တာ သော်လည်းကောင်း၊
Powered (extract or exhaust and depressurization) ventilation: Fan နဲ့ပဲ စုတ်ထုတ်တဲ့ နည်းဖြင့် သော်လည်းကောင်း၊
A combination of both: နှစ်ခုကို သင့်တော် သလို ပေါင်းစပ် ပြီးတော့ သော်လည်းကောင်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဒီစနစ် ကို Sprnikler Protection နဲ့ တွဲပြီး စဉ်းစား ဒီဇိုင်း လုပ်လေ့ရှိပါတယ်။ မီးမတော်တဆ မှု ဖြစ်တဲ့ အခါ Sprinkler က ပက်ဖြန်းငြှိမ်းသတ်၊ ပြီးမှ Smoke extraction systems နဲ့ မီးခိုးတွေ ကို ရှင်းလင်း ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
နေရာ လိုအပ်ချက်လိုက်ပြီး သတ်မှတ်ထားတဲ့ မီးရဲ့ပြင်းအား နဲ့ အရွယ်အစား နဲ့ အခြားလိုအပ်တဲ့ အခြေအနေ အချက်အလက်တွေ ကိုအခြေခံ ပြီး လိုအပ်တဲ့ Air Extraction rate ကိုတွက်ချက်ပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အထပ်မြင့် အဆောက်အအုံ တွေ မှာ မီးလောင်မှု ဖြစ်ခဲ့ရင် မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ အသုံးပြုနိုင် ဘို့ Fire Lift/Elevator ကိုတပ်ဆင် ထားပေး ရပါတယ်။ မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ အလွယ်တကူ ဝင်ရောက် နိုင်တဲ့ နေရာမှာ ထားရှိပေးရ မှာ ဖြစ်ပြီး အမိုးအထိ ရှိသမျှ အထပ်တိုင်း ကို သွားနိုင် ဘို့လိုအပ် ပါတယ်။
အရေးပေါ် အခြေအနေ မှာ မီးသတ်သမားတွေ ပဲ သီးသန့် သုံးနိုင် ထိန်းသိမ်းနိုင်အောင် စီမံထားပေး ရပါမယ်။ ဒါ့အပြင် မီးသတ်ဌာန Fire Department တွေရဲ့ အခြား လိုအပ်ချက် တွေ (ရှိခဲ့ရင်) ကိုပါဝင်ထည့်သွင်း ထားပေးဘို့ လည်း လိုအပ်ပါတယ်။ ဥပမာ Firemen တွေပဲ သီးသန့် ထိန်းသိမ်း မောင်းနှင် လို့ ရနိုင်ဘို့အတွက် Fireman Switches တွေ နဲ့ Fireman အချင်းချင်း ဆက်သွယ်နိုင်ဘို့ Fireman Intercom တွေ ကို ပါဝင် ရမှာဖြစ်သလို Lift Shafts နဲ့ Fire Lift Lobby တွေက လည်း မီးဒါဏ်ခံ နိုင်တဲ့ Protected Area ဖြစ်ဘို့ လိုအပ်ပါတယ်။
In the event of failure of the normal supply (ပုံမှန်လာနေကျ မီးပျက်ခဲ့ရင်) Life Safety စနစ် တွေ ကို ချက်ချင်းအလိုအလျောက် ပါဝါပေးနိုင်အောင် emergency power system တစ်ခုကို တပ်ဆင်ထားပေးရပါမယ်။
On failure of the normal service (မီးပြတ်သွားတဲ့ အခါ) အလိုအလျောက် Generator ရဲ့ စက် ကို နှိုး နိုင်ဘို့ သင့်တော်တဲ့ လုံလောက်တဲ့ အင်အားရှိတဲ့ prime mover လိုအပ်ပါတယ်။ Prime mover ဆိုတာ ကတော့ Motorized Starter ပါ။ သူ့အတွက် လုံလောက်တဲ့ electricity supply ရဘို့ ကိုတော့ Battery တွေ ထားပေးထားရပါမယ်။
Emergency power system ကနေပေး ရမဲ့ fire protection system နဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ emergency loads တွေကို အောက်မှာ ဖော်ပြထား ပါတယ်။
Smoke control and management system
Pump sets for Firefighting
other emergency fire systems
Essential Systems လို့ခေါ်တဲ့ မီးသတ်စနစ် မဟုတ်ပေမဲ့ အဆောက်အအုံ အတွက် မရှိမဖြစ် အရေးပါတဲ့ စနစ် တွေ အတွက် လည်းထည့်သွင်း စဉ်းစားရပါတယ်။ ဒါတွေ ကတော့
Submersible Drainage / Sewerage Pumps
ဒါ့အပြင် အဆောက်အအုံ ရဲ့အသုံး ပြုမှု နဲ့ လိုအပ်ချက် ကို လိုက်ပြီး Client/Owner ရဲ့ လိုအပ်ချက် တွေ ကို လည်း ထည့်သွင်းစဉ်းစား ပေးရမယ်။
Blackout လို့ခေါ်တဲ့ Normal Power Failure အခြေအနေ နဲ့ Emergency က တစ်ထပ်တည်း ကျချင် မှ ကျပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့် Blackout (မီးပြတ်ပြီး) Emergency Fire Situation မဟုတ်ခဲ့ရင် Essential System တွေကို ပါဝါပေးလို့ ရပါတယ်။ အားလုံးက လိုအပ်ချက် တွေ ကို ကာမိအောင် ခြုံငုံ စဉ်းစားရတာပါ။ ဘယ်အချိန်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် နှစ်ခုလုံး ကို ပေးချင်တယ်၊ ပေးရမယ် ဆိုရင် တော့ Generator ကြီးမှာပေါ့၊
The Fire Engineering - Performance Based Approach
The Fire Engineering - Performance Based Approach (FE-PBA) isamethodology for design, evaluation and assessment office safety in buildings. it identifies an engineering approach to building fire safety, and gives guidance on the application of scientific and engineering principles, to the protection of people and property from unwanted fire. Additionally, it outlinesastructured approach, to assessment of total building fire safety system effectiveness, and to the achievement of pre-identified design objectives
The methodology facilitates performance-based design that meets the fire safety objectives of Building Codes. Many factors, includingabuilding's form of construction, means of escape, occupancy factors, smoke management, detection, alarm and fire suppression facilities, contribute to the achievement of fire-safety objectives. The guidelines of Fire Engineering-performance Based Approach, are based on the premise that all these measures, form part of an integrated fire safety system for the building, which must respond to any fire developing within that building,.
Consequently, it is required that designers recognize the interactions between elements ofafire safety system and that they develop complete and integrated design solutions.
The basic principles of Fire Engineering - Performance Based Approach may be applied to specific types of buildings and their uses. However, the principle and the guidelines developed do NOT cover buildings which are used for bulk storage or processing of flammable liquids, industrial chemicals or explosive materials. The intrinsic risks associated with such buildings will necessitate special consideration and is beyond the scope of this chapter.
The Fire Engineering - Performance Based Approach concept is intended for application during the conceptual phase of building fire safety system design, prior to the detail design, specification and documentation phase of selected fire-safety sub-systems (or elements). Fire Engineering procedures require early consultation and co-operation between the project manager, Architect and other members of the design team, together& with the Fire and Rescue Department.
The detailed design and specification of fire-safety sub-systems (which will follow agreement of the conceptual design) may not be specific during this stage. But it is imperative that when executed, these strictly adhere to the decisions and agreements reached during the conceptual phase.
ရေသုံးတဲ့ Fire System တွေ မှာ ပါလေ့ရှိတာ ကတော့ အတော်ကြီးမားတဲ့ Pumps တွေ နဲ့ ရေလှောင်ကန် တွေ ပါ။
စာရေးသူ အရင် Projects တွေ မှာ အသုံးများ တဲ့ Pumps ကတော့ Aurora ပါ။ UL Listed Pumps တွေ မို့ အခြား Pumps တွေ ထက် ဈေး အတော် ပိုလေ့ ရှိပါတယ်။ နမူနာ အနေ နဲ့ သွားရောက် လေ့လာ နိုင် ဘို့ အတွက် Link ကို အောက်မှာ ပေးထား ပါတယ်။
Aurora Fire Pumps Website
Fire Pumps Brochure Download
ပုံမှန်အားဖြင့် Pump one set မှာ one duty pumps + one standby pump + one jockey pumps ဆိုပြီး Pump သုံးလုံးတွဲ ပါလေ့ရှိပါတယ်။ Standby pump က အကြောင်းတစ်ခုခု ကြောင့် Duty pump အလုပ် မလုပ်တဲ့ အခါ အစားထိုး နိုင်ဘို့ ထားတဲ့ အရံပါ။ Highly Pressurized လုပ်ထားတဲ့ Pipe တွေ Fitting တွေ မှာ ရေယိုတာ၊ စိမ့်တာ ကို လုံးဝ တားဆီး နိုင်ဘို့ မလွယ်ပါဘူး။ ဒီအခြေအနေ မှာ System Pressure ကို ထိန်းထားဘို့ က လည်း အရေးကြီး ပါတယ်။ ဒီလို Pressure ထိန်းဘို့ တာဝန် ကို Jockey pumps ကယူပါတယ်။ Jockey pump က main pumps (duty+standby) တွေထက် flowrate အများကြီး နည်းပါတယ်။ သူ့ရဲ့တာဝန် က ရေယိုစိမ့်တဲ့ အခြေအနေ မှာ Pressure ထိန်းယုံ မို့ ဆောင့်ပန်း၊ ဆောင့်ရပ် မဖြစ်ရလေအောင် oversize မလုပ်မိစေဘို့ သတိထား ရပါမယ်။ (CP 52:2004 မှာတော့ Jockey Pump (Pressure Maintenance Pump) Capacity ကို To make up the allowable leakage within 10 min atarate of flow not exceeding4L/min လို့ ကန့်သတ် ထားပါတယ်။)
Fire Protection System Equipments Manufacturer Reference
Sprinkler Heads, Fire Water Tank Panels & Fire Pumps တွေ ကလွဲ လို့ အခြား Fire Protection နဲ့ ပတ်သက် တဲ့ Products တွေ အားလုံး နီးပါး ကို ထုတ်လုပ် ပြီး စင်္ကာပူ၊ မလေးရှား နဲ့၊ Australia ကို အဓိက ပို့နေတဲ့ Manufacturer တစ်ခု ရဲ့ web link ကို အောက်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ အဲဒီ မှာ ထုတ်လုပ်တဲ့ ပစ္စည်းတွေ ရဲ့ ပုံတွေ ကို သွားရောက် လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
Steel Recon Industries (SRI) Malaysia Product Page
Fire Protection Article Online
Web ပေါ်မှာ Fire Protection နဲ့ပတ်သက်လို့ ခြုံငုံ ရေးသားထားတဲ့ စိတ်ဝင်စားစရာ ဆောင်းပါး တစ်ခု ကို ဖတ်ဘူးပါတယ်။ အခု စာဖတ်သူ အတွက် ဆက်ညွှန်း လိုက်ပါတယ်။
Fire Safety Educations
Fire Safety နဲ့ပတ်သက် လို့ စကာင်္ပူ နိုင်ငံ မှာ Fire Safety Manager Courses တွေ ကို SCDF နဲ့ Polytechnics ကျောင်းအချို့ မှာ တက်ရောက်နိုင် ပါတယ်။။
Fire Protection Engineering Association/ Society အချို့ကနေ လည်း ကမ္ဘာ အဝှမ်း Learning Program တွေ ကို သင်ယူ နိုင်သလို Certification Tests / Exams တွေ ကို လည်း ဝင်ရောက် ဖြေဆို နိုင်ပါတယ်။
In the United States, the University of Maryland (UMd) offers an ABET-accredited bachelor of science degree program in fire protection engineering, as well as graduate degrees. Worcester Polytechnic Institute (WPI) offersamasters andaPh.D. in fire protection engineering. Other institutions, such as Oklahoma State University, the University of Kansas, Illinois Institute of Technology, University of California, Berkeley, and University of Houston – Downtown have offered courses in fire protection engineering or technology.
In Europe, the University of Edinburgh has been among the first universities to offeradegree in Fire Engineering and had its first research group in fire in the 1970's (these activities are now conducted at the new BRE Centre for Fire Safety Engineering). Other European Universities active in the fire engineering are Lund University, Stord/Haugesund University College, University of Manchester, University of Ulster, University of Leeds, University of Greenwich and London South Bank University
British Standard -BS 5306 : Part 2: "Design of Automatic Sprinkler Systems", 1990
Singapore Standard : Code of Practices
CP 10 : "Code of practice for the installation and servicing of electrical fire alarm systems", 2005
CP 13 : "Code of practice for mechanical ventilation and air-conditioning in buildings", 1999
CP 29 : "Code of practice for fire hydrant systems and hose reels", 1998
CP 31 : "Code of practice for installation, operation, maintenance", performance and constructional requirements of mains failure standby generating systems", 1996 (Revised as SS 535 : 2007)
CP 55 : "Code of practice for use and maintenance of portable fire extinguishers", 1991
NFPA (U.S.A) Codes
NFPA 14: Standard for the Installation of Standpipe, Private Hydrant, and Hose Systems
Uniform Building Bylaw
Guide on Fire Protection Systems in Buildings (Red Book )
Fire Triangle (မီး တြိဂံ)[ http://en.wikipedia.org/wiki/Fire_triangle ]
Fire Classes [ http://en.wikipedia.org/wiki/Fire_classes ]
[ http://chawlwin.blogspot.com/2008/10/ http:/en.wikipedia.org/wiki/Fluoroform ]
[ http://en.wikipedia.org/wiki/Pentafluoroethane ]
[ http://en.wikipedia.org/wiki/Dichlorotrifluoroethane ]
Fire Extinguishers [ http://en.wikipedia.org/wiki/Fire_extinguisher ]
[ http://www.scdf.gov.sg/scdf_internet/en/building-professionals/publications.html ]
[ http://www.firesafe.org.uk/html/fsequip/exting.htm ]
The Hanford Fire Department : All You Ever Wanted to Know about Fire Extinguishers
[ http://www.hanford.gov/fire/safety/extingrs.htm ]
YouTube - Car vs. Fire Hydrant[ http://www.youtube.com/watch?v=_g6I65rLdWA ]
[ http://chawlwin.blogspot.com/2008/10/ http:/www.youtube.com/watch?v=Qpff-nxeZQI ]
YouTube - Fire Hydrant Training[ http://www.youtube.com/watch?v=1nsD864K6pk&NR=1 ]
Fire Hydrant Organization[ http://www.firehydrant.org/ ]
Pyrogen Technologies Sdn Bhd[ http://www.pyrogen.com ]
Fire Equipment Supplier: Canada [ http://canadafire.com/products.html ]
မြန်မာနိုင်ငံ မှာလည်း နွေရာသီ ဆို မီးကိုပဲ ကြောက်နေရတာ ပါ။ သာမန် ပြည်သူတွေ မှာ မီးကင်းစောင့်ရ၊ အထုတ်ပြင်ရ နဲ့ အလုပ်လည်း ဖြောင့်ဖြောင့် လုပ်ကြရဟန် မတူပါဘူး။ ရန်သူမျိုးငါးပါး ထဲမှာ ပါဝင်တဲ့ မီးကြောင့် ဆုံးရှုံးတာ ကလည်း များလှပါပြီ။
ဒီမီးဘေး ကာကွယ်ရေး စနစ်တွေ ထွန်းကားလာ၊ သုံးစွဲလာ နိုင်မယ် ဆိုရင် ကုန်ကျစရိတ် ရှိပေမဲ့ မဆုံးရှုံးသင့် တာ မဆုံးရှုံးတော့ တဲ့အပြင် ပိုမို လုံခြုံမှု ကိုပေးပါလိမ့်မယ်။
Posted by Ko Chaw - ကိုချော at 4:32 AM Labels: Fire Protection, MEP Systems